Iyo FAS yakatsanangura maitiro ekudzora mitengo yezvigadzirwa zvakakosha munharaunda - "Potato System" magazini
Izvo zvinokwanisika kumisikidza yakakwira yekutengesa mitengo yezvigadzirwa kana yavo mutengo mudunhu ichiwedzera ne60 muzana kana kupfuura kwemazuva makumi matanhatu akateedzana. Izvi zvakataurwa neTASS ichitaura nezvevashandi venhau veFederal Antimonopoly Service (FAS).
Hurumende inobvumidzwa kudzora mitengo yezvigadzirwa zvakakosha munharaunda. Rondedzero yemamwe marudzi ezvekudyidzana akakosha ezvigadzirwa zvechikafu nemaitiro ekumisikidza mitengo yepamusoro yekutengesa inotemerwa nemutemo weKabineti
"Nekudaro, mitengo yepamusoro yekutengesa inogona kumisikidzwa kana mukati memazuva makumi matanhatu mazuva akateedzana padunhu renzvimbo yakazvimiririra yeRussian Federation kana matunhu enzvimbo dzeRussian Federation, kuwedzera kwemitengo yezvitoro zvezvigadzirwa zvekudya gumi muzana kana kupfuura, kusanganisa mwaka, "meseji inodaro.
Kudzikamisa mitengo yevatengi yezvigadzirwa zvakakosha munharaunda, zviyero zvakaita sekuwedzera kwemitero yemitero yekutengesa kunze kwenyika, zvibvumirano pamutengo wemutengo pakati pevagadziri nemaketeni ezvitoro, rubatsiro rwevagadziri, nematanho ekudzvinyirira mutemo anoshandiswa.
Pakupera kwaMay, Mutungamiri Vladimir Putin vakazivisa kuwedzera kwemamiriro acho nemitengo yezvigadzirwa zvakakosha munharaunda. Akacherechedzawo kuti Russia inotenda kune vamwe vayo nekutsigira danho reMoscow rekugadzirisa mamiriro ezvinhu pamusika wezvokudya.
Munguva yemutsetse wakananga, Mutungamiri Putin vakati kuwedzera kukuru kwemitengo yechikafu muRussia kwakanyorwa muna 2020 nekutanga 2021.
Source: Pepanhau reparamende
Tags: mutemo wemutengo